Taageerihii soo dhex galay ciyaartii Barcelona iyo Real Mallorca ee habeenkii sabtida oo ka sheekeeyay qaabkii ay ugu suuro gashay inuu soo galo garoon taageerayaasha laga xiray – Gool FM
(Spain) 15 Juun 2020. Wiilkii dhallinyarada ahaa ee soo galay garoonka intii ay socotay ciyaartii ay Barcelona 4-0 ku xaaqday Real Mallorca habeenkii sabtida ayaa ka sheekeeyay qaabkii ay ugu suuro gashay inuu usoo tallaabo halka lagu ciyaaro, xilli kulankaas lagu ciyaarayay albaabo xiran.
Wiilka dhallinta yar ayaa isagoo ordaya soo galay garoonka Son Moix oo ay ka socotay ciyaar laga joojiyay inay soo xaadiraan taageerayaal si looga taxaddaro is dhex galka bulsho ee sababi kara inuu faafo xanuunka coronavirus, waxaana uu doonayay inuu isla sawirro kabtanka Barcelona ee Lionel Messi.
“Waxaan garoonka imid daqiiqaddii 40-aad aniga oo la socda saaxiibbadey, waxaana doonayay inaan sawir la galo Messi” ayuu isagoo is qarinaya u sheegay idaacadda Cadena COPE ee dalka Spain.
“Waxaan ka dul booday xayndaab laba-mitir ah.
“Waxaan taagnaa bannaanka, jaranjarada ayaan fuulay oo waxaan aaday garoonka.
“Waxaan durba raadiyay Messi. Waxaan marka hore arkay Jordi Alba, waxaanna weydiistay sawir.
“Waxaan u ordayn dhanka Messi, balse feyrus-ka jira dartiis, isaga ma uusan rabin sawirka.
“Waxaan ku qeyliyay ‘Messi sawir fadlan, fadlan Messi fadlan” ayuu yiri wiilka magaciisa qariyay.
Taageerahan ayaa sidoo kale xaqiiqijiyay markii la qabtay inay booliska u yimaadeen oo la weydiiyay su’aalo ku saabsan naftiisa iyo qoyskiisa, waxa uu intaas ku daray in la ganaaxi doono.
Kaddib diidmadii Jadon Sancho, Kooxda Manchester United oo markaan bartilmaameed kale sameysatay